Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Maty ny iray, am-polony maro no tsy hita popoka tamin'ny loza roa-ferry tany India
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Cruising • Vaovao Mafana India • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona am-polony tsy hita popoka taorian'ny fifandonana roa-ferry tany Majuli, India.
Fiara mpandeha roa no nifandona tany India.
Nihombo ny sambo mpandeha kely kokoa tany India.
Farafaharatsiny mpandeha an-tsambo iray novonoina tamin'ny loza.
Fiara mpandeha roa be loatra mandeha amin'ny lalana mifanohitra aminy no nifandona tamin'ny Reniranon'i Brahmaputra ka hatrany avaratry ny tanànan'i Jorhat, any amin'ny fanjakana avaratra atsinanan'i Assam, androany.
Raha ny voalaza dia misy olona maherin'ny 100 ao anaty sambo, izay mbola tsy hita ny ankamaroan'izy ireo ary atahorana ho faty.
Lahatsary mivezivezy an-tserasera dia mampiseho sambo lehibe iray mavesatra, izay nitondra mpandeha ary koa fiara maromaro, nifatratra tany anaty sambo mpandeha kely kokoa.
Ny kely kokoa baka nivadika avy hatrany taorian'ny fifandonana, niditra anaty rano tao anatin'ny segondra vitsy monja taorian'ny fianjerana, horonan-tsary nanelingelina izay toa notifirin'ny mpandeha tamin'ny seho lehibe kokoa. Nihazakazaka nivoaka ny sambo nilentika ny olona, ​​vaky ny entany.
Tsy nisy ny fampahalalana momba ny mety ho faty.
Ferry dia be mpampiasa amin'ny fitaterana ao India. Matetika ny lozam-pifamoivoizana dia satria be loatra ny olona ary tsy mahomby ny fikojakojana sy ny fiarovana azy ireo.